मनीषाको जय होस् « LiveMandu
२ चैत्र २०७७, सोमबार ००:१६
नेपालीका लागि भारत र चीन अति महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि भारत हाम्रो साँस्कृतिक परम्परा र सभ्यतामा बाँधिएको घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हो । त्यतिमात्र नभएर नेपालीसँग भारतीयहरूको ‘रोटीबेटी सम्बन्ध’ भएको कुरामा पनि दुईमत राख्न सकिँदैन । तर पनि नेपालप्रति बेला बखतमा भारतले गर्ने गरेको छुद्र व्यवहारको स्वागत गर्न सकिँदैन ।
भारतले नेपाल र नेपालीलाई बाहिरबाहिर गुलियो चटाउँदै भित्रभित्रै धीमा विष चाहिँ नखुवाए हुने ! बेलाबखतका यस्तै कृत्यका कारण भारतीय नीति नेपालीका लागि सह्य नभएको हो ।
अहिले नेपाल र भारतको सीमा विवाद चुलिँदै आइरहेको छ । यस्तो बेला नेपालकी एक जना गौरवी नारी मनीषा कोइरालाको जयजयकारमा नेपालीहरूको एक मत देखिएको छ ।
लेखकः नइ प्रसाई
‘स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ भन्ने शास्त्रीय उक्तिका आधारमा भन्ने हो भने पनि शासक या राजनीतिज्ञ कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सम्मानित हुन्छ तर वाङमयकै एक हिस्सा कलाकार पनि संसारभरि पुजिन्छ । त्यसैले तिमी भारतमा सम्मानित कलाकार भयौ । कलाले तिमी त्यहाँ पुग्नु भनेको तिम्रो स्वयम् वर्चश्व हो ।
भारतीय सिनेमा उद्योगकी शिखर अभिनेत्री प्रिय मनीषा तिमीले आफ्नो राष्ट्र नेपालको संरक्षणका लागि ‘चीन समेत त्रिपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्नु पर्छ’ भनेकी हौ । तिमीले ‘चीनको नाउँ किन लिएको’ भनेर भारतीय समाचारदायी संस्थाले तिम्रो किन चाहिँ खेदो खनेको हो ?
आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कुनै नेपालीले ऐन सम्मत बोलेको कुरालाई तल्लो स्तरमा पुगेर गाली गर्ने, सराप्ने र धिकार्ने मिडियाको स्तर माटैमा पुग्दैन र ? अनि उसले एउटी मनीषा कोइरालाको अपमान गरेको भन्ठान्ला ! तर त्यस अपमानले एउटा सिङ्गो राष्ट्रलाई आघात पर्दैन र ? त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले समग्र कला र कलाकारको अपमान गरेको ठहर्दैन र ? यस्तो रवैयाले ती मिडियाको हैसियत पानी मुनि पुग्दैन र ? यदि भारतीय सरकारको रोहबरमा यी मिडियाले विष ओकलेका होइनन् भने भारत सरकारले कला र कलाकारको सम्मानका लागि त्यस्ता मिडियालाई अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्छ ।
नेपालमा भारतीय विस्तारवादी नीतिको घृणा गरिन्छ । नेपालसँग मात्र नभएर सबै छिमेकी राष्ट्रसँग भारतको हेपाहा नीति भएको कुरा जगजाहेर छ । हुनत संसारमै अधिकांश साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको यस्तै प्रवृत्ति हुने गर्छ । तर भारतसँग हाम्रो शास्त्रीय सम्बन्ध भएको बेहोरा भारत किन घरिघरि बिर्सिन्छ ? हिजो अर्काको गुलाम बसेको मुलुकले सधैँ स्वाधिन भएको मुलुकलाई दुक्ख दिइरहने काम छ त ?
तिमीलाई भारतीय मिडियाले ‘भारतको खाते चीनके गीत गाते’ भनेर आरोप लगाएको बेहोरा सुन्दा हामीलाई दुक्ख लागेको छ । साहित्यकार, सङ्गीतकार, कलाकारलाई कुनै पनि मुलुकको सिमानाले छेक्न सक्तैन । ‘स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ भन्ने शास्त्रीय उक्तिका आधारमा भन्ने हो भने पनि शासक या राजनीतिज्ञ कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सम्मानित हुन्छ तर वाङमयकै एक हिस्सा कलाकार पनि संसारभरि पुजिन्छ । त्यसैले तिमी भारतमा सम्मानित कलाकार भयौ । कलाले तिमी त्यहाँ पुग्नु भनेको तिम्रो स्वयम् वर्चश्व हो ।
मनीषा ! तिमी नेपालकी गौरव, भारतीय सिने उद्यागकी शिखर कलाकार र विश्व सिने परिप्रक्ष्यकी महत्त्वपूर्ण अभिनेत्री हौ ।
मनीषा ! तिमी नेपालकी छोरी भएर भारतमा आफ्नो प्रतिभाको झण्डा गाड्ने विराङ्गना हौ । भारतले तिमीलाई भुईँबाट टपक्कै टिपेर सिँहासनमा राखेको पनि होइन । तिमीले त आफ्नो अथक मिहेनत, जाँगर र अदम्य प्रतिभा खर्चेर भारतीय सिने उद्योगको शिखर आरोहण गरेको कुरा घामझैँ उदाङ्गो छ ।
तिमीलाई पालेको भन्ने मिडियाले तिमीले खेलेका सिनेमाहरू संसारभरि बेचेर कति पैसा कमाएको छ ? भन्ने हिसाब पनि सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्थ्यो नि ! त्यो कुरा चाहिँ खोइ त ?
अर्को कुरा नेपाललाई स्वार्थ नराखी भारतले अहिलेसम्म केही पनि दिएको छैन । संसारले देखिने गरी उसले एक हातले दिने र उसले सैयौँ हातले नेपालका अमूल्य धरोहरहरू लिने गरेको कुरा पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको नै विषय हो ।
नेपाललाई बरबाद पार्नका लागि भारत हातै धोएरै नेपालको पछि लागिपरेको कुरा पनि खुलासा हुँदै गएको छ । उसका दलालहरू नेपाल बिगार्न समर्पित भएको बेहोरा पनि लुक्न सकेको छैन ।
दुक्खको कुरा एउटै छ; हामी नेपालीको नेतृत्वकर्ता नै लोभीपापी भए । त्यसैले भारतले नेपाललाई कठपुतली मञ्चनको मञ्च बनाउन सफल भएको हो ।
भारतका कठपुतलीहरूका कारणले नै नेपाली जनता बारम्बार भारतबाट तिरस्कृत हुँदै, ठगिँदै र हेपिँदै आएको कुरा अर्को सत्य हो । मनीषा ! यो तिमीसँगको भारतीय मिडियाको छोटोपनको प्रस्तुति पनि यिनै कठपुतलीहरूकै उपज हो ।
वीपी कोइराला राष्ट्रवादका कट्टर हिमायती थिए । उनी दुरदर्शी र देशभक्त राजनेता थिए । त्यस‌ैले उनी भारतीय प्रलोभनमा कहिले परेनन् । उनका लागि नेपाल मुटु जत्तिकै प्रिय थियो । तिमी उनैकी नातिनी हौ । साथै तिमी प्रकाश कोइरालाजस्ता राष्ट्रवादीकी सुपुत्री हौ । तिमीले आफ्नो रक्तकणमा भएको राष्ट्रवादी प्रवृत्तिको उजागार गरेर फेरि एक पटक नेपाली गौरवको उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छौ । हामी तिम्रो जय मनाउछौँ; प्रिय मनीषा !
• नरेन्द्रराज प्रसाई
• इन्दिरा प्रसाई
#कालापानी र लिपुलेक